Diimaynta Aafooyinka Dabiiciga ah! – Kaasho Maanka
Waligeedba wadaadadu waa ay is-xiijin jireen wax walba oo cusub e, kadib soo if-baxii xanuunka Koroonaha, wadaado badan baa xujo-diimeed ka dhigtay xanuunkan aafeeyay dunida, ayaga oo leh; “aaway kuwii awoodda sheeganayay, il-ma-aragto aan loo jeedin ayaa baabi’isay, cilmigii waa fashilmay, xanuunkani waa caro Alle oo waxba lagama qaban karo …” iyo waxyaabo la mid ah.
Wadaadadu laba goorba waxa ay ina tusayaan heerka ay ka joogaan fahamka sida arrimuhu ama dhacdooyinku u shaqeeyaan.
Marka koobaad, xal waxaa la baadi goobaa goorta ‘sabab iyo saamayn’ doobiyaan. Xanuunku waxa uu marayaa heerkii saamaynta oo waa xanuun cusub. Cilmiguna uma shaqeeyo in uu xanuun iman doona daawo meel usii dhigo. Maadaama xanuunku ugub yahay, in la fahmo ayaa ka horreysa in wax laga qabto. Xilli bilawgii la fahmayay ama la darsayay xanuunka ayaa lagu jiraa, balse waa hubaal in bahda cilmigu sanadkan oo aan dhamaan ay xal u heli doonaan xanuunkan. Haddaba wadaadadu intaas ha garteen, waqtigana fursad ha siiyeen, illeen dhacdaduba hadda uun ayay dhacday e.
Marka labaad, marka aad adigu xalka hayso ayaa lagu faanaa in aad xujo hayso. Soo ceeb ma aha in wadaadadu ayagoo laftigoodu waxa dhacaya aanan ka warqabin ay sheegtaan in xanuunkani yahay xujo diimeed aan la loodin karin. Waxaan arkayay wadaadka Sheikh Umal ah oo leh, masaajidda xiri mayno, waayo xanuunku ma gaarin heer masaajidda loo xiro. Waxaad moodaa in wadaadku sugayay inta xanuunku ka gaarayo heerkii Wuhan (magaaladii xanuunku ka bilawday) oo kale oo markaas uun ayuu xiri lahaa masaajidka. Wadaadadu ha fahmeen in “ka-hortagidda aafo” aysan la macna ahayn “in aad aafada sugto.” Dawladda Kenya oo fahamsan faa’iidada “ka-hortagga” ayaa ugu dambayn xirtay masaajidkii uu wadaadku ku sugayay in ay aafada kusoo booqato.
Ugu dambayn, marka laga reebo diinta Islaamka, ma jirto diin kale oo ka mid ah diimaha faraha badan ee shanta kun ku dhow ee laga aaminsanyahay dunida oo sheegatay ama u nisbaysay in ilaaheeda oo careysani uu xanuunkani dunida kusoo fasaxay. Wadaadada Islaamka ayaa sheegtay in xanuunkani yahay askari ka mid ah askarta Allaah oo shaqadiisii ka qabsanaya Dhulka. Wadaadadu ayaga ha isku keen qabadsiiyeen in ay marna ina baraan in aan niraahno, “wixii xun nafteena iyo shaydaan ayay ka ahaadeen” marna aan niraahno xanuunkan aadka u xun ee insaanka dabarjaraya ayaa Allaah ka ahaaday.
W/Q: Gallad Gurxan 7th April 2020